Facebook ရဲ့ Dating Feature က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မှာလဲ?
7 May 2018 . 2:54 PM
Facebook ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တုန်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ F8 Developer Conference မှာ Facebook ကနေ Date ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Feature အသစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးသွားမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု Facebook ရဲ့ Dating Feature အသစ်ကဘယ်လိုမျိုး အလုပ်လုပ်မှာလဲ? ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုလို့ရလာမှာလဲဆိုတာကို အခု Article မှာ ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Facebook ရဲ့ Chief Product Officer ဖြစ်တဲ့ Chris Cox ကတော့ အခု Feature က Facebook ကို စတင်တည်ထောင်ပြီးထဲက ထည့်သွင်းဖို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အချိန် ၁၄ နှစ်လောက်ကြာပြီးမှ တကယ်ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
Facebook ဟာ အခုလိုမျိုး Dating Feature ကို ထည့်သွင်းပေးဖို့ ကြိုးစားတာက Tinder လိုမျိုး Application တွေကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုကလည်း အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားလာတဲ့ User တွေရဲ့ Privacy Data တွေကို ခိုးယူခံရမှုသတင်းကို ဖုံးကွယ်သွားစေဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ရဲ့ Dating Feature အသစ်အကြောင်းကို သိထားသမျှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Facebook Profile နဲ့ပဲ အသုံးပြုရမှာလား?
အခု Feature ဟာ Facebook App ကနေပဲ အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပေမယ့် Dating Feature ကို အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် သီးခြား Profile တစ်ခုကို ထပ်မံ Setup ပြုလုပ်ရမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အဆိုပါ Dating အတွက် Feature အတွက် Profile အသစ်ကိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အသုံးပြုသူကိုပဲ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေနဲ့ Date လုပ်ရမှာလဲ?
Facebook က ကိုယ့်ရဲ့ Interests တွေနဲ့ အခြားသော Locations နဲ့ Data တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ Groups ဒါမှမဟုတ် Events တွေကို Unlock လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ့်အတွက် Date လုပ်ဖို့ Recommend ပေးတဲ့သူက ကိုယ်နဲ့ အကြိုက်တူညီတဲ့သူတွေပဲဖြစ်နေမှာပါ။
Dating Feature မှာ တူညီမှာမဟုတ်တော့တဲ့ Messaging Feature
အခု Facebook Dating Feature မှာ Messaging စနစ်ကလည်း သာမန် Facebook Messenger ကနေ စတင်အသုံးပြုရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ သီးခြား Messaging Service ကနေ အသုံးပြုရမှာပါ။ Facebook က ကိုယ့်အတွက် Recommend ပေးလိုက်တဲ့ Date လုပ်ရမယ့်သူကို Text Only Message တစ်စောင်အရင်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ တဖက်က အဆိုပါ Message ကို ပြန်ပြီး Reply လုပ်မှသာ Facebook Messenger ကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ အခု Dating Feature ကို သုံးနိုင်မှာလဲ?
Facebook ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဘယ်အချိန်မှာ အခု Feature ကို ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကို အတိအကျပြောကြားသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လာမယ့်လပိုင်းမှာတော့ အသုံးပြုသူတွေကို စတင်စမ်းသပ်သွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Single တွေ Facebook ကနေ လက်တွဲဖော်ရှာဖွေတာ အခုထက်ပိုပြီး လွယ်ကူလာတော့မလား? Akhayar ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
Facebook ကနေ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျသတ်တပတျတုနျးက ကငျြးပခဲ့တဲ့ F8 Developer Conference မှာ Facebook ကနေ Date ပွုလုပျနိုငျတဲ့ Feature အသဈတဈခုကို ထညျ့သှငျးပေးသှားမယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု Facebook ရဲ့ Dating Feature အသဈကဘယျလိုမြိုး အလုပျလုပျမှာလဲ? ဘယျအခြိနျမှာ အသုံးပွုလို့ရလာမှာလဲဆိုတာကို အခု Article မှာ ဖျောပွသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Facebook ရဲ့ Chief Product Officer ဖွဈတဲ့ Chris Cox ကတော့ အခု Feature က Facebook ကို စတငျတညျထောငျပွီးထဲက ထညျ့သှငျးဖို့ စိတျကူးထားတဲ့ Feature တဈခုဖွဈပွီးတော့ အခြိနျ ၁၄ နှဈလောကျကွာပွီးမှ တကယျထညျ့သှငျးနိုငျခဲ့တာဖွဈတယျလို့လညျး ပွောခဲ့ပါတယျ။
Facebook ဟာ အခုလိုမြိုး Dating Feature ကို ထညျ့သှငျးပေးဖို့ ကွိုးစားတာက Tinder လိုမြိုး Application တှကေို ယှဉျပွိုငျဖို့ ဖွဈနိုငျပွီးတော့ နောကျတဈခုကလညျး အခုနောကျပိုငျးဖွဈပှားလာတဲ့ User တှရေဲ့ Privacy Data တှကေို ခိုးယူခံရမှုသတငျးကို ဖုံးကှယျသှားစဖေို့လညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ Facebook ရဲ့ Dating Feature အသဈအကွောငျးကို သိထားသမြှ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Facebook Profile နဲ့ပဲ အသုံးပွုရမှာလား?
အခု Feature ဟာ Facebook App ကနပေဲ အဓိကအသုံးပွုသှားမှာဖွဈပမေယျ့ Dating Feature ကို အသုံးပွုတော့မယျဆိုရငျတော့ နောကျထပျ သီးခွား Profile တဈခုကို ထပျမံ Setup ပွုလုပျရမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ အဆိုပါ Dating အတှကျ Feature အတှကျ Profile အသဈကိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့ လကျတှဲဖျောဖွဈနိုငျတဲ့ အသုံးပွုသူကိုပဲ ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဘယျသူတှနေဲ့ Date လုပျရမှာလဲ?
Facebook က ကိုယျ့ရဲ့ Interests တှနေဲ့ အခွားသော Locations နဲ့ Data တှကေို အသုံးပွုပွီးတော့ ကိုယျနဲ့ ကိုကျညီမယျလို့ ယူဆရတဲ့ Groups ဒါမှမဟုတျ Events တှကေို Unlock လုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ကိုယျ့အတှကျ Date လုပျဖို့ Recommend ပေးတဲ့သူက ကိုယျနဲ့ အကွိုကျတူညီတဲ့သူတှပေဲဖွဈနမှောပါ။
Dating Feature မှာ တူညီမှာမဟုတျတော့တဲ့ Messaging Feature
အခု Facebook Dating Feature မှာ Messaging စနဈကလညျး သာမနျ Facebook Messenger ကနေ စတငျအသုံးပွုရမှာမဟုတျပဲနဲ့ သီးခွား Messaging Service ကနေ အသုံးပွုရမှာပါ။ Facebook က ကိုယျ့အတှကျ Recommend ပေးလိုကျတဲ့ Date လုပျရမယျ့သူကို Text Only Message တဈစောငျအရငျပေးပို့ရမှာဖွဈပွီးတော့ တဖကျက အဆိုပါ Message ကို ပွနျပွီး Reply လုပျမှသာ Facebook Messenger ကို အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
ဘယျအခြိနျမှာ အခု Dating Feature ကို သုံးနိုငျမှာလဲ?
Facebook ကိုယျတိုငျကတော့ ဘယျအခြိနျမှာ အခု Feature ကို ထုတျပေးသှားမယျဆိုတာမြိုးကို အတိအကပြွောကွားသှားခွငျးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လာမယျ့လပိုငျးမှာတော့ အသုံးပွုသူတှကေို စတငျစမျးသပျသှားမယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ Single တှေ Facebook ကနေ လကျတှဲဖျောရှာဖှတော အခုထကျပိုပွီး လှယျကူလာတော့မလား? Akhayar ပရိသတျကွီးရော ဘယျလိုမွငျပါသလဲ?